Dhageyso Xildhibaan KGS ka mid ah kana soo jeeda Degmada Buurhakaba oo sheegey horumar lataaban karo inuu ka jiro Degmadaas | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dhageyso Xildhibaan KGS ka mid ah kana soo jeeda Degmada Buurhakaba oo...
Dhageyso Xildhibaan KGS ka mid ah kana soo jeeda Degmada Buurhakaba oo sheegey horumar lataaban karo inuu ka jiro Degmadaas
Xildhibaan maxamed muran oo looyaqaano [Mad muran] oo ka mid ah Xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya islamarkaana ka soo jeeda Degmada Buur hakaba oo wareeysi siiyey Radiyo Baydhabo ayaa sheegey horumar weyn oo la taabankaro inuu kajiro Degmadaas.
Waxaana uu sheegey isbuucii la soo dhaafey in ay kormeer ay kutageen Degmada Buurhakaba iyadoo ay ku wehliyaan sida uu sheegey xildhibaano kale wasiiro iyo qaar kamid ah hay,adaha .
Waxaana uu sheegey Degmada Buurhakaba hada kahor in aysan yeelan Airpor oo haatan uu socdo dhismaha airporkaasi oo ay isku tashteen shacbka Degmadaasi iyaga oo gacan ka helaya maamulka halkaasi kajira wax hay ad ahna aysan gacan kahelin iyaguna ay ku dhiiro geliyeen howlahaasi.
Waxaa kale uu sheegey Xildhibaan Mad muran in uu xirnaa Cisbitaalka Degmadaasi Buurhakaba isla markaana dib loofurey iyaga oo la kaashadey hay,adda world vision haatanna uu shaqeeynayo isla markaana shacabka ay ku nasteen.
Waxaa kale uu sheegey haatan in ay ku hawlanyihiin sidii Nalalka Soolarka ah loogu xiri lahaa wadooyinka degmadaasi Buurhakaba. Xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegey ammaanka Deegaanadaasi in uu aad u wanaagsanyahay.
Waxaana xusid mudan in dhawaan Buurhakaba ay Ceel Riig ah ka qodeen Ciidamada Amisom gaar ahaan kuwa Itoobiya ee Ku sugan Buurhakaba.Shacabka deegaan kaasina ay aad ugu baahnaayeen mar un in ay helaan Ceelbiyood Biyahiisa ay macaan yihiin iyada oo Degmadaasi Buurhakaba ay Biyo yaraan aad u baahsan ay kadhici jirtey Xilliyada Jiilaalka.